I-Semalt: Izihloko ze-WordPress nama-Frameworks
Kuwo wonke umsebenzisi we-WordPress omusha, umsebenzi wokukhetha isihloko esihle ngokuvamile uvame ukushintsha umdlalo. Njengendlela ejwayelekile yokusebenzisa izingqikithi, ukusebenzisa isihloko esisha sewebhu elisha uzizwa kahle. Amabhizinisi amaningi akhetha indawo yesikhulumi njengendlela entsha yokumaketha. Kulezi zimo, laba bantu banquma ukufuna isihloko esihle se-WordPress. Kwezinye izimo, abantu bakhetha ukusebenzisa izihloko ngenxa yezinkinga zentuthuko noma izinkinga zokuklama. Umuntu angadonsa zonke lezi zithiyo ngokukhetha nokusetshenziswa kwetheksthi efanelekayo ye-WordPress. Izihloko kulula ukuyisebenzisa nokuthuthukisa. Ngaphezu kwalokho, abasebenzisi bangakwazi ukwengeza izici zabo ngokufaka i-plugin ye-WordPress engenza yonke indawo ibe ne-tweaks ekhethekile.
U-Ivan Konovalov, onguchwepheshe ohola phambili Semalt , uqinisekisa ukuthi zonke izihloko ze-WordPress azifani. Kukhona izingqikithi ezihlukahlukene ezenzelwe amawebhusayithi ezigaba ezahlukene. Abasebenzisi abahlukene bangafeza imisebenzi ehlukahlukene ngokusebenzisa izingqikithi ezahlukene. Kulesi sigaba, abasebenzisi abasha banenkinga ekukhetheni phakathi kwetheksthi ye-WordPress, noma uhlaka lwetheksthi lwe-WordPress. Kunzima ukunquma ikakhulu lapho umuntu ethola zonke izinhlobo zezingqikithi ekusesheni kwabo. Ngaphezu kwalokho, iwebhusayithi yakho ingaba isayithi elijwayelekile ikakhulukazi uma usebenzisa izindikimba zengane. Ku-WordPress, kuneziqondiso ezilula zokulandela ezihlokweni zokukhetha ngenhloso ethile..Kulula ukuqonda izincazelo zabo ezicacile kanye nemigomo nezincomo zabo. Kulesi sihloko se-SEO, kuzoba nezindlela ezahlukene zokuqonda indlela lezi zisebenza ngayo. Ngaphezu kwalokho, kuzoba khona izincazelo zamacala.
I-WordPress Theme Framework: Uhlaka lwetheksthi lwe-WordPress lungasho enye yezinto ezimbili:
Ukungezwa kumxholo wamanje ongakusiza ekuthuthukiseni isihloko esiqondile noma ikhodi ye-standalone yendaba eqalayo engangezwa kwenye ingqikithi ukwenza imisebenzi yayo ehlukahlukene, noma ukusebenzisa njengenye isifanekiso setimu.)
Ingqungquthela yezingane: Le nhloko ayiphelelanga, njengesihloko somzali. Esihlokweni somntwana, kufanele kube nombono womzali owenza ukusebenza kwewebhusayithi. Ukwengeza, ihlanganisa kuwo ukuhlelwa nokuhlelwa kokusebenza, okungaguquki lapho ukubuyekezwa kwetihloko zomzali.
Ukuze ukwazi ukulawula izibuyekezo zakho zezingqikithi, kufanele ufunde indlela ihloko yakho yomzali esebenza ngayo. Kwezinye izimo, abalobi bezithombe ze-WordPress baqhubeka bekhulula izibuyekezo zezingqikithi zabo. Kulezi zimo, ungadinga ingqikithi yengane ezoqhubeka isebenza kusibuyekezo. Khumbula ukuthi uma izibuyekezo zemixholo, izinguquko eziphathelene namafayela azo ahambisana nazo. Ungadinga ingane ephathekayo ukuze ukwazi ukugcina lezi zinguquko.
Ama-Framework ahlukile kuzibuyekezo zezingqikithi. Noma kunjalo, uhlaka lwetheksthi lusebenta njengethemplate yewebhusayithi yentuthuko. Isebenza ukuthi ifakwe esihlokweni esihlukile kepha hhayi ukusetshenziswa njengethi ngokwayo. Ithikili ye-WordPress yomzali ingasebenza 'ngaphandle kwebhokisi,' kodwa uhlaka lwethekimu lungadinga ukuthi isihloko sezingane sibe umsebenzi ophelele. Kungenzeka ukusebenzisa i-plugin ye-WordPress esihlokweni esiphelele.